DevOps Certification ao Gurgaon | Fampiofanana DevOps ao Gurgaon - ITS
Fanofanana momba ny fanofanana momba ny DevOps
Momba ny fanofanana momba ny fanofanana ny DevOps
Fampiofanana momba ny fanofanana DevOps - Curriculum fianarana
Ny fampiofanana momba ny Certification DevOps dia manampy anao hamporisika hatrany ny fampihavanana sy ny fanandramana, ny fampitaovana sy ny fandaharam-potoana tsy tapaka, ny fanaraha-maso ny fampiasana fitaovana, ohatra, GIT, Jenkins, Puppet, Chef, Docker, Ansible, SaltStack ary Nagios mba hanatsarana ny dingana samihafa ao amin'ny SDLC.
DevOps dia asa iray amin'ny fanamafisana ny fampivoarana ny fampandrosoana sy ny fandaminana. Ity dingana ity dia natao hamolavolana anao DevOps amin'ny alalan'ny fanomezana anao an-tanana ny fanomanana ny fitaovana izay namolavola ho toy ny endri-pampana DevOps.
ITS DevOps fanomanana eo amin'ny tranonkala dia natao hanampiana anao hiverina ho mpanamboatra DevOps. Ao anatin'ity fandaharam-potoana ity, ireo mpampianatra DevOps mpanabe dia hanampy anao:
Ampahafantaro ny hevitra sy ny filan'ny DevOps
Avereno ny fepetra takiana amin'ny DevOps sy ny olana ara-piainana andavanandro izay itoerany
Fantaro ny fametrahana sy ny fametrahana ny rafitra ara-dalàna mahazatra toy ny Apache, & Nginx ho an'ny Enterprise.
Ianaro ireo fitaovana DevOps malaza toy ny Jenkins, Puppet, Chef, Ansible, SaltStack, Nagios ary GIT
Manaova fanavaozana ny rafitra fanarenana, fametrahana sy fandaminana
Fantaro ireo drafitra fanabeazana
Famolavolana fananganana sy fanangonana, fitambarana tsy misy dikany mampiasa GIT
Manoritsoritra ny fahombiazan'ny fiarovana sy ny fametrahana fototra fototra ho an'ny fotodrafitrasa
Ny serivera mpikirakira an-tserasera mampiasa ny Code izay fantatra amin'ny anarana hoe Infrastructure ho toy ny Code
Hamafiso ny fepetra takiana sy ny hevitry ny Monitoring and Logging.
Ankoatra ireo foto-kevitra efa voatonona teo aloha, mba hanampiana anao hahazo ireo fitaovana malaza DevOps, dia ho azonao ihany koa ny 4 fanampiny izay tarihan'ny tenany manokana, anisan'izany ny fampisehoana, fandaharana kilasy, andraikitra, valiny ho an'ireo fitaovana miaraka aminy:
Docker – Fomba fanehoana, karazana Virtualization, samihafa eo anivon'ny Xen & KVM, Virtualization Cloud.
Ansible – Ny fampidiran-dresaka, ny fametrahana sy ny famaritana, ny kilalaon-teny, ny 37 azo jerena, ny andraikitra samihafa sy ny fampiasana baiko.
lohany – Boky fanolorana, fananganana bokim-bokatra, tanjona nodorana sy fikarohana, data-sacks, tontolo manodidina ny Chef, andraikitra, fampiasana ny fehin-kery amin'ny famokarana ary mampiasa ny Open Source Chef Server.
saribakolin'ny – Ny fametrahana ny rafi-pandaminana an-tariby sy ny fizotran-tserasera, ny fiteny puppet, ny tontolo iainana izay manamboatra ny vavahady sy ny môlejy, ny fametrahana tranonkala tranonkala sy ny fanatanterahana ny modules manohitra ny mpitarika puppet.
Iza no tokony handeha amin'izany lalana izany?
Ireo manam-pahaizana DevOps dia anisan'ireo manam-pahaizana IT manam-pahaizana manokana indrindra amin'izao fotoana izao, ary mitombo haingana ny tombontsoa ho azy ireo. Miaraka amin'ny fisondrotry ny sehatra vaovao momba ny fibodoana DevOps, ny olona rehetra mikatsaka ny hiditra ao amin'ireo ampahany vaovao, dia afaka mandray io lalana DevOps io. Ny sasany amin'izany:
Tsy misy fepetra voafaritra manokana hipoitra manokana amin'ny DevOps Practitioner. Izay olona manana fandraisana anjara fototra amin'ny IT na fampahalalana ilainaLinux ary ny Networking dia afaka mivadika ho Devot's Practitioner.
Manaova pejin-tranonkala mahatsikaiky mampiasa ny Apache Web Server.
Soraty ny rakitra shell izay mitatitra hoe:
Fitaovana maro samihafa voafaritra amin'ny mpanjifa sy ny OS.
Ireo tarehimarika voatanisa miaraka amin'ny entana ao amin'ny server.
Ny Top 5 dia mamaritra karazany maro.
Amboary ny fitantanana amin'ny alàlan'ny fahatsiarovana
Asehoy amin'ny Nagios ao amin'ny tranonkalan'ny VM ny fanaraha-maso ny mari-pamantarana hafa an'ny VM.
1. Fampidirana amin'ny DevOps sy ny zavatra ilaina
Ireo tanjona -Amin'ity loha ity dia ho takatrao ny DevOps sy ny zavatra ilaina, ny ampahany DevOps, ny olana andavanandro sy ny valiny. Hahita ihany koa ianao momba ny endrika fototra ary hahatakatra ny Skalability and Availability.
Ireo lohahevitra - Pahaizana momba ny fampandrosoana sy ny famahana ny olana, ny fampivoarana ny fahaiza-manaony sy ny fahatokisany, ny fahatakarana ny format manan-tompo sy ny olany, ny fahatakarana ny fitomboana sy ny fahafaha-manao, ny adihevitry ny tambajotra avy amin'ny tanjona kendren'ny View.
2. Mpandrindra fanamorana iraisam-pirenena
Ireo tanjona - Ao amin'ity modely ity, dia ho hitanao ny momba ny Infrastructure Servers samihafa, ny Configuration and Optimization.
Modules - Miasa amin'ny DNS Server amin'ny Internet Scale, DNS Installation, DNS Configuration, DNS Tuning and Geolocation. Mpandraharaha amin'ny tranonkala tahaka an'i Apache, Ngnix sy ny fahasamihafana misy azy ireo, Apfigio Apache & Nginx ho an'ny orinasa, Manan-danja amin'ny alalan'ny proxy HA sy ny fananganana NFS ho an'ny fampisehoana.
Labs - DNS Fandrindrana sy Configuration, DNS Master / Configure Slave, HTTPD Web Server fikandrana, HA Proxy Setup - Ny fametrahana ny HTTP sy TCP mifototra amin'ny fametrahana sy ny fametrahana sy ny fametrahana Ngnix.
3. Hamarino ny fanontam-pirinty sy ny fametrahana automatique
Tanjona mianatra - Amin'ity loha ity, dia ho hitanao ny fametrahana automatique of servers, fifandraisana tsy tapaka, fametrahana famolavolana sy fanodinana.
Modules - Fametrahana Linux Servers mampiasa baoty PXE na fanombohana fanombohana, fikolokoloana ariary Yum ary fanamafisana automatique Framework. Fandaminana SVN sy GIT.
Labs - Linux Methoding Methods - Setup PXE (Preboot Environment Settings) sy Linux Repository Setup.
4. Fahombiazana amin'ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny fiarovana sy ny fiarovana ny fotodrafitrasa
Ireo tanjona - Amin'ity lohahevitra ity, dia ho hitanao ny momba ny ampahany Performance amin'ny Infrastructure avy amin'ny fomba fijery Enterprise sy ny fampiharana ny fiarovana mba hahatonga ny tontolo iainana ho azo antoka kokoa.
Modules - Ny rafitra fiasan-tsehatra mifototra amin'ny hevitra sy ny zava-manahirana, ireo karazana fandaharam-pandrafetana rakitra, ny fampisehoana sy ny fampiasana ireo fepetra, ny fikirakirana ny fikirakirana ny tambajotra sy ny fiantraikany, ny fahatakarana ny fiarovana amin'ny OS sy ny tamba-jotra, ny fikandrana Linux Firewall sy ny fomba fiarovana hafa ho an'ny toe-javatra azo antoka.
Labs - Fanavaozana automatique automatique, SVN sy Git Configuration ary IP Tables.
5. Fametrahana sy fametrahana ny Jenkins sy ny puppet
Ireo tanjona -Ao amin'ity modely ity, dia ho hitanao ny fametrahana sy ny fametrahana ny Jenkins sy ny puppet.
Modules - Fametrahana ny Jenkins, fanamarinana amin'ny LDAP, UNIX sy ny sisa, Integration amin'ny SVN, Famindrana baiko an-telefaona, Fametrahana sy fampisehoana puppet, fampisehoana sarimihetsika sy sary, Puppet with SVN.
Labs - Ny fananganana Jenkins sy ny fametrahana, Jenkins sy SVN dia ny famonoana Jenkins Remote, Asa fanorenana amin'ny alalan'ny fandefasana mailaka, Fametrahana puppet sy Configuration, Puppet Manifest Illustrations Ny famoronana ny mpampiasa, ny orinasa Tomcat, ny rafitra Apache Server sy ny MySql Parameter miova.
6. Fampidirana amin'ny Automation amin'ny Ansible sy SaltStack
Ireo tanjona - Ao amin'ity modely ity, dia ho hitanao ny momba ny voany sy ny boloky ny Ansible, Playible livreaux, Fitantanana ny firaketana / dinamic Inventory, Modely modely.
Modules - Ny rafitra rafitra toy ny Code, fametraham-pitondran-tena, rafi-pampianarana azo tsidihana, bokikely famandrihana an-tsoratra, famandrihana mibaribary / dinamika, famandrihana modely, ohatra sora-tanana, fanjakana SALTStack, SLS ary Top dokam-barotra, tenimiafina, mpanolotra, modely modely, fandrefesana.
Labs - Fametrahana fametrahana, Playbooks mora vakiana, Fitrandrahana ala, Salt.
7. Famaranana amin'ny Chef
Ireo tanjona - Ao amin'ity modely ity, dia ho hitanao ny Basics of Chef, Chef Cookbooks, Chef Architecture, Tools - Knife and Scripting sy Chef Development Kit.
Labs - Fitaovam-baomieran'ny baolina: Commandeur Chef et Messer.
8. Fanaraha-maso, logging, Tomcat ary fitaovan'ny fitaovana
Ireo tanjona -Amin'ity lohahevitra ity, dia hanangom-bolo isika amin'ny Monitoring, ny fisoratana anarana ary ny fanombantombana fanampiny ny fitaovana DevOps / baikom-panafody izay fototry ny fampiharana isan'andro. Isika koa dia hanangom-baravarana amin'ny fametrahana Tomcat Server.
Modules - Fampahafantarana ny fitaovana fanoratana samihafa, Fahatakarana ny rafitra fanaraha-maso, Mametraka sy mampifanaraka ny fanaraha-maso Nagios momba ny fotodrafitrasa, ny fametrahana ny Tomcat Server ary ny fanoharana, Fahatakarana ny singa miavaka amin'ny Openssl sy ny Openssh, Mahatakatra ny rsync ho an'ny fanamafisana, Mahazatra ny fepetra tahaka ny: lsof, netstat, Free, beat, vmstat, iostat, to-time, discover, screen, strace, disc charges like - df, du, mkfs, tune2fs, fdisk, dd, Understand / and so forth / fstab, Mount orders.
Labs - Syslog fametrahana sy ireo tranga, Nivadika ny logiciel, Design Nagios ary fikarakarana ho an'ny servisy Linux sy LDAP miaraka amin'i Jenkins.
Inona no azo atao? Ahoana ny fomba itoriana?